Guraandhalaa 27, 2020
Paartiin morkattootaa lama, Addi Bilisummaa Oromoo fi Koongirasin Federaalaw Oromoo Oromiyaa keessa sochoonee hojii siyaasaa hojjechuu hin dandeenyee, miseensonnii fi deggartoonni keenya gaaffii malee hidhamaa jiru jechuun komii dhageessisaa jiran.
Rakkoolee isaan mudataa jiran ibsuun Boordii Filannoo Biyyaalessaatti iyyachuu isaaniillee dubbatu. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa immoo komee paartiileen kun dhiheeffatan irraa ka’uun qaama dhimmi ilaallatuuf xalayaa barreessuu isaa beeksise.
Bulchiinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaa gama isaatin paartileen kun rakkoolee nu mudataa jira, jedhan caasaa mootummaa sadarkaa sadarkaan jirutti himatanii akka furmaatni kennamuuf gohuu tu irra ture, jedha. Gabaasaa guutuu caqasaa.
Itoophiyaan kora hujii ijaarsa hidhaa abbaayaa irratti Amerikaa DC-ti Gurrandhalaa 27f qabatan yaayyuu keessaa hafte
Maallaqa Mootummaan Itiyoophiyaa Ramadeera Jedhame Nu hin Geenye:Barattoota Chaayinaa Keessaa
Lammileen Itiyoophiyaa mana hidhaa Taanzaaniyaa turan biyyatti deebifaman
Seenaa Pireezdntii Masrii Duranii, Hoosnii Mubaararak Irraa Amma Tokko
Jarman Weerara Hawaannisaa Baha Afriikaa to’achuuf kan oolu Yuuroo Miiliyoona 3 Arjoomte
Daandiin Konkoolaataa fi Baabuuraa Cufamee Jira: Prezidaant Musxafee
Baahir Daar Keessatti Hiriirrii Gaggeeffamee Jira